Turkey Hard Dhuxul Enterprises (TTK) Heshaa New tareenka | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDATurkey Hard Dhuxul Enterprises (TTK) Heshaa tareen oo cusub
27 / 02 / 2012 DUNIDA, GUUD, Headline, TURKEY
Turkey Hard Dhuxul Enterprises (TTK) by-soo-saarka gudaha iyo dalka maanka TULOMSAS faa'iido / Eskisehir, taas oo ah mid ka mid ah 1000 keentay wax soo saarka qaaday at HP. K Waxaan nahay gobolka labaad ee Gobolka Badda ee ka dib Samsun, oo leh jidka tareenka ee dekedda, ayaa TTTTTK Isgaarsiinta Isgaadhsiinta iyo Isgaarsiinta Dadweynaha ku dhawaaqay. Xaqiiqda ah in adeeggan muhiimka ah ee ay bixiso machadkeenna sida TTK ayaa sidoo kale loo arkaa inay tahay dhacdo farxad leh. Shirkadeena, gaadiidka tareenka oo kaliya Kozlu iyo gaadiidka qarxa ee Üzülmez laga helo hay'adaha
TCDD ma aha oo keliya saldhiga Zonguldak. Waxay sidoo kale gaari kartaa badeecooyin kala duwan oo maraakiibta ka mid ah unugyada dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay oo ku yaal saldhigga TCDD ee wata gawaarida. Adeeggan, oo la sameeyey tan iyo sannadkii 1950, ayaa ka badbaaday ilaa maanta iyo sii socdo inkastoo qaabeynta magaalada. Muhiimadda jidadka tareenada ayaa la muujiyay, labaduba waa kuwa lagu magacaabo "Generator Power Generator", taas oo ah iibsadaha dhuxusha laga soo saaro, iyo gaadiidka baabuurta ee KARDEMİR, iyo sidoo kale gaadiidka alaabooyinka soo socda ee dekedda gaadiidka wadaha.
Gaadiidka tareenka wuxuu ku billaabmay kumbuyuutar oo ku shaqeeya tareenka, waxaana uu sii waday iskudhafka MAK, tufaaxa semi-automatic iyo tikidhada tikidhada ee rome. Tareenadaas, oo dhammaystiray noloshooda dhaqaale, ayaa la diiday. Iyadoo la tixgelinayo soosaarka gudaha iyo faa'iidada waddankeena, unugyada 1000 ayaa laga soo iibsaday tareenada HP 2007 tareenada ay soo saartay TÜLOMSAŞ / Eskisehir ee 2; Sannadkan, tirada 1 waxaa lagu soo wareejiyay 13.02.2012 waxaana lagu soo daray adeegga gaadiidka tareenka ee xarunteenna.
Xigasho: News X
TTK waxay kiraysan doontaa tareenka
Rabshadaha daadka ayaa sii socota
Daadad ku taal waddada Tunceli Ovacık
Degmadu waxay bilowday inay shaqeyso gu'ga
Shirka Taariikha Taariikha Taariikha Taariikhda ee 100 ee Beyxehir
300 KILOMETER SPEED TALOOYIN KU SAABSAN QIIMEYNTA
Keltepe wuxuu ahaa 'jahwareer sare'